Esexwayiso ngemikhonyovu edolobheni. | News24
Esexwayiso ngemikhonyovu edolobheni.
AMAPHOYISA asekhiphe isexwayiso emphakathini ukuba uqaphele uma ukhipha imali emabange.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Zandra Wiid uthe sekube khona imibiko eminingi lapho abantu bentshontshelwa izimali zabo abazisebenzele unyaka wonke.
UWiid uthe kwesinye isigameko kuqhamuka ugalakajana akuthembise ukuthi uma umnika imali yakho uzokubuyisela seyiphindwe kabili. Kuthiwa labantu bathi faka imali yakho emvilophini, uma usumnikile anyamalale nemali yakho.
“Enye yezindlela lezinswelaboya ezenza ngayo ukuthi zikusukele nje umuntu azenze uhlobo lomuntu oboniswayo noma oyinyanga, athi udinga ukugezwa amabhadi athi mnike imali engaka ukuze akusize,” kusho uWiid.
Amaphoyisa athe ayawunxusa umphakathi ukuthi uqaphele ungathembi noma ubani.
UWiid uthe okunye okumele kuqashelwe ukuphucwa kwezikhwama. Uthe abantu abayeke ukuhamba bekhuluma namafoni ngoba ilapho izigebengu zithola ithuba lokuhlwitha isikhwama ngesikhathi unganakile.
“Okunye ukuphathwa kwezincwadi ezibalulekile ezinezimfihlo zakho esikwameni singekho isidingo kumele lokhu abantu bakugweme,” kusho uWiid.
Abezitokofela nabo badonswa izindlebe ngokuphatha isamba semali uzohamba ngezinyawo edolobheni. UWiid uthe okungcono abezitokofela abavule amakhadi asebhangi ukugwema ukuphatha imali enkulu.